FILANA ANDAVANANDRO : Miaka-midina ny vidin’ny vary ao Taolagnaro
Faritra anisany manana ny maha izy azy raha ny distrikan’i Taolagnaro. Ity farany izay tokony handroso be amin’ny lafiny maro saingy tsy vitsy ihany koa ireo sakana isan-karazany, anisan’izany ny haratsian’ny lalana mihazo ny toerana. 20 novembre 2017
Tato ho ato izao dia hita ho niovaova be ny vidin’ny vary izay foto-tsakafo, ao an-tampon-tanànan’i Fort Dauphin. Tsara ho fantatra fa roa karazana ihany amin’ny ankapobeny ny vary hita eny an-tsenan’i Taolagnaro, dia ny vary « stock » izay nohafarana avy any ivelany sy ireo vary gasy vokarin’ny mponina any an-toerana izany.
Fantatra ihany koa fa in-droa miantaona ny fotoam-pamokarana ny vary gasy any an-toerana dia ny vary aloha sy ny vary tsipala. Raha ny fanazavana voaray dia herim-batana fotsiny no am-piasan’ireo tantsaha amin’ny famokarana amin’ny ankapobeny fa mbola vitsy dia vitsy ny mampiasa ny fitaovana, toy ny kibota sy ny “Tracteur”, ny “Charrue” sy ny sisa. Izany toe-javatra rehetra izany no mahatonga ny famokarana mbola tsy tena mahavaly ny filàn’ny tsena, na amin’ny kalitao izany, na amin’ny habetsaka.
Manoloana izany dia miaka-midina tokoa ny vidim-bary ao Fort Dauphin satria dia 78 000 Ariary, iray volana lasa izay, ny iray gony amin’ny vary nohafarana ary eo anelanelan’ny 430 sy 500 Ariary eo eo ny iray kapoaka amin’izany. Ny vary novokarina avy any an-toerana kosa dia jifaina amin’ny sarany 500 Ariary ny iray kapoaka. Tao anatin’ny tapa-bolana izay dia nahitana fiakarany ny vidim-bary satria dia nahatratra 84 000 Ariary ny iray gony, ary tafakatra hatrany amin’ny 550 Ariary ka hatrany amin’ny 600 Ariary ny iray kapoaka, na izany vary gasy na vary nohafarana.
Ny faran’ny herinandro lasa teo indray anefa dia nahitana fidinany indray izany vidim-bary izany satria dia efa nivoaka avy eny amin’ny seranan-tsambo ireo vary nohafarana ka manomboka atobaka eny an-tsena, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny sampan-draharaham-paritry ny varotra sy ny fanjifana. Ity farany izay nanindry fa hiverina amin’ny vidiny teo aloha izany vary izany, izany hoe 78 000 Ariary ny iray gony ka hojifaina amin’ny 450 Ariary ny iray kapoaka.
Tsy mitombina ihany koa ny vidin’entana hafa
Manoloana ireo trangan-javatra maro samihafa misy ankehitriny dia tsy mipetraka araka ny tokony ho izy avokoa ny vidin’entana, ohatra amin’izany ny ao Taolagnaro ao. Fantatra mantsy fa mahatratra 7 000 Ariary ny iray kilao amin’ny henan’omby amin’izao fotoana izao, raha eo anelanelan’ny 8 000 sy 9 000 Ariary kosa ny kilaon’ny henan-kisoa.
Ny akoho lahy dia sandaina amin’ny sarany 1 800 ka hatrany amin’ny 20 000 Ariary, 1 600 Ariary kosa ny iray amin’ny akoho vavy. Araka ny fantatra dia miaka-midina ihany koa ny vidin’ny solika any an-toerana amin’izao fotoana noho ny antony maro samihafa. Hatreto kosa anefa dia mbola tsy misy fiantraikany amin’ny vidim-piainana iainan’ny olona izany, toy ny saran-dalana sy ny zavatra hafa.